Renaissance edolobhaneni Gelendzhik uyawuthanda idumela elihle kakhulu phakathi izivakashi. Indawo yokukhulekela zabahamba edonsela ajabulisayo emfuleni indawo dolmens ongaqondakali, ukugcina izimfihlo lasendulo.
Izivakashi e-Krasnodar esifundeni kudingeka siqhubeke indawo, futhi sakujabulela kwalesi sigodi, lapho amanzi awo Janet - emfuleni esakha kwesinye sezigodi olunothile kakhulu eRussia.
esigodini Special magic
Le yindawo ethandwa kakhulu phakathi izivakashi ehlaselwe umlingo okhethekile kulendawo esiyingqayizivele enomlando ezithakazelisayo. Kwasukasukela khona ezichithekile Tethys Sea, okuyinto yaqala ukuvela ekuqaleni kwenkathi Jurassic. Futhi kuze kube namuhla, futhi kuthiwa ngobulili wendawo Museum esifuze uhlala kwezilwane zasolwandle uJanet. River kanye eziningana nemingenela yayo endleleni yayo, ukudala izimpophoma esiyingqayizivele, okubangela eziningi imizwelo emnandi phakathi izivakashi.
Amazing emkhathini we esigodini, okuyinto has a amandla eqinile, ukugcizelela asibekela ovusa, okuyinto kusimangaze kungekho sinye, kodwa noma amehlo kwazo zonke izimenywa charm yayo.
Izimpophoma ezakhiwe emfuleni
Izimpophoma emfuleni UJanet zibabaza play emangalisa yokukhanya Jets icwebezela futhi Curves bushelelezi. It akukuniki izinkambo emvuleni, lapho zonke izindlela kuthiwa kwaluqeda eshaweni futhi babe esingaweleki kwezivakashi.
A amakhilomitha angamakhulu kusukela sigodi waterfall ngowokuqala echibini lapho ungakwazi ukubhukuda futhi inkokhelo omuhle. Janet - umfula ukuthi isikhathi elikhulu khona namyla okuthiwa echibini inkomishi-like, futhi manje bajabula wachela izivakashi, abathi amandla okuphulukisa amanzi wendawo.
Kuze esigabeni esilandelayo abhekane amakhilomitha okungenani ezintathu, kodwa umbukwane ajabulisayo esivula phambi kwamehlo izivakashi eyakukuveza nakho okungavamile. UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki umbala impophoma engaba yishumi amamitha eliphezulu futhi niphumule unyawo lwakhe Bowl lothando - the ezikhangayo esemqoka izindawo athandwayo.
Mayelana izikhumbuzo zemvelo anemisila ezisekelweni ukuzibuka, futhi kuya izinkomishi ezitebhisini encani okuyindlela elula ukwehla. Nokho, ngisho ngosuku olushisayo amanzi abanda njengeqhwa abanga izinkinga, ngakho izivakashi kufanele baqaphe.
ezinganekwaneni zasendulo we Cascades
Abantu bendawo uzokutshela legend of hunter ekhazimulayo wathandana indodakazi yenkosi yase amanzi. Kwaphela isikhathi eside umfana wahlupheka wedwa futhi ngingazi ukuthi ngingaqhubeka kanjani ukuba zidonse ukunaka kwanoma nomthwebuli yakhe. Yena akazange agodle ngisho elengayo yakhe ethandekayo ne Emerald futhi bamphonsa amanzi amnyama, okuyinto ngokushesha wayithi luhlaza enhle ogqamile. Njengoba uyise wentombazane wabusisa nenjabulo emshadweni esizayo.
Enye legend uya ukuthi ageze lapha edilini elikhulu we Epiphany beyoba imiqemane njalo futhi abajabule. Fantastically impophoma enhle thutheleka ngokubabazekayo unika ekugxiliseni futhi ikhanga wonke romantics, kuyaqapheleka ukuthi kule ndawo ukuba afuthwe ngesibulali-energy Akumangalisi eqinile. Abasand 'ukutjhada kusuka ezweni lonke ngokushesha lapha, bagxuma amanzi, emnikeza uthando nenjabulo yokuphila isikhathi eside.
Izimpophoma emfuleni UJanet: kanjani lapho?
Idumile izivakashi esigodini izimpophoma itholakala 15 ukusuka Gelendzhik. Nge resort ibhasi Shuttle, okuyinto kusithatha sonke imvuselelo kwalesi sigodi, futhi ukusuka lapho uye esigodini, izivakashi hamba ngezinyawo. Woza lapha, noma ingxenye hambo, noma uwedwa. Ukungena esigodini ikhokhwe - Imali kwemvelo ruble kunamasonto angaba amakhulu amathathu.
Kukhona ahlelwe isikhumbuzo ezitolo, ezimakethe kanye inani elikhulu amaphuzu Caterers, ngakho ukuthola imali eningi.
Inani lale ekhoneni kuyinto landscape esiyingqayizivele hhayi kuphela. izimpophoma Famous - akulona kuphela Luhambo nesigodi ezakhiwe mfula uJanet. Umfula, okuyizinto izikhumbuzo we Bronze Age, uzibuthe izivakashi abafisa sicacise imfihlakalo yayo. Ukugcina imemori komlando okhokho dolmens ongaqondakali ube namandla amakhulu. Kukhona isiko ukuthi isifiso ejulile, efihlekile nabo, nakanjani ukugubha, futhi wonke umuntu ihlangabezana nezinkinga ezingathí sina, bakutholaphi isinqumo ezingalindelekile.
izakhiwo bamatshe esakhiwe ngaphambi kwesikhathi sethu esivamile, bajabule ezingqondweni zabo bonke ososayensi emhlabeni, bezama ukuqonda imfihlo ingaphakathi amagugu asendulo. I dolmens, sizungezwe izihlahla eminyaka ubudala, athole izinsalela zabantu, kodwa abacwaningi ayikwazi ngokuqiniseka ukuthi kwakhiwa kuphela njengoba ithuna. Kungenzeka, le "zamatshe" (Nakutjhugululwako kutjho kusukela Celtic elithi "dolmen") ayenenjongo ezahlukene, okuyinto isayensi ayikaziwa.
UJanet emfuleni olunothile Isigodi megaliths abadumile sakhiwa slabs omkhulu noma amatshe kusetshenzwe. Ingaphezulu izakhiwo itshe ehlotshiswe ngemihlobiso iyazithakazelisa izazi izithombe. Okumangalisayo ukuthi amapuleti ukuthi bakha uhlobo "indlu", ngokunembile kakhulu kushintshwe nomunye, futhi baze babe anemifantu emikhulu.
Dolmens, ehlanganisa amatshe amakhulu, lapho sezingcweti lasendulo eyayiqoshwe izitini abe ukuma oyindilinga ne owawugcwele owodwa imbobo. Ukwakhiwa aliveza amabhlogo encane, futhi ngetshe elilodwa le ukwakhiwa ligamanxa.
Kukhona ocatshangelwayo ezithakazelisayo ukuthi megaliths - kungcono izinto yisakhiwo sodumo ngawo ukuxhumana nezinye emhlabeni. Ososayensi baye bathola emasangweni dolmens esiqoshiwe sase-, futhi wathola ukuthi lesi sibalo sisho into i-portal ukuze esinye isici. Ukuze ukufaka beza kubapristi wabikezela Ngokuzayo esimweni ezishintshwe. Kwatholakala ukuthi izakhiwo itshe ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana ongaphakeme-imvamisa oscillations ezinomthelela psyche womuntu.
Dolmens nge umlando wasendulo - elinye ukuthatheka, okuyinto bodumo ngalé esigodini Gelendzhik Jean River. Trip ku endaweni, lapho has a amandla emimoya, bonke agcinwe isikhathi eside. Izivakashi zibabaza zobuciko yisakhiwo sodumo, wezwa iziphonso sethusa futhi owabona imicikilisho engaqondakali, imfihlo okuyinto ongeke neze waba nayo ukuxazulula ososayensi emhlabeni wonke.
ezikhumbuzo omngcwabo esitolo lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa wamuka okhokho, futhi uze dolmens esotericism kusukela hhayi kuphela iRussia kuphela kodwa nakwamanye amazwe ukuzizwa emkhathini ekhethekile yokungena kule ndawo. Izwe egcwele izimfihlakalo, edonsela abathandi engavamile, abakholelwa ukuthi ngosizo we megaliths kungaletha inhlanhla nomndeni inhlalakahle, bafinyelele ukukhanyiselwa futhi sithole amandla.
Abalandeli be-yoga, ubuBuddha zonke qakala indaba ongaqondakali bakholelwa ukuthi indawo engcwele kusiza ukuthola ukuthula emphefumulweni wami futhi ngokuvumelana nemvelo. Mhlawumbe hhayi izivakashi olulodwa abangazange benamandla umoya kulendawo emangalisayo. Eduze megaliths, okuyinto kule County kukhona mayelana idazini, bafaka amabhentshi, lapho abantu azindle ithemba lokuthola injabulo eside elindelwe.
Abantu abaningi bazama ukuthatha kukhunjulwa amatshe dolmen kodwa ososayensi ukuncoma hhayi ukukwenza. Okokuqala, ngenxa yamandla enamandla esigodini, ezakhiwe emfuleni UJanet (isithombe okusesihlokweni esithi) okuyinto. Futhi okwesibili, etsheni nezakhiwo izinsalela kwabantu, uthathe izinto evela emathuneni - ngcolile bika abaphilayo. Kulabo abafuna ukuthatha nawe okuthile ukukhumbula, kuwo wonke ujike kukhona isikhumbuzo izitolo, okuyinto ukuthengisa kwemifanekiso amancane dolmens.
Umfula encane UJanet Gelendzhik lezwakala sibonga izimpophoma ezinhle futhi dolmens, elise esigodini komhosha. Abantu beze lapha ukuze bajabulele ubuhle bemvelo, ukuthola ukulinganisela sifinyelele kuvumelana kwalo.
Isimo sezwe, banqoba yisiphi isihambi lapho uqala nje ukubona, ngeke ikuthinte ehlala njalo ukunikeza eziningi imizwelo eyakhayo.
I-India: amasiko, amasiko, umlando